Jeenyo iyo Dekedda oo midkood ay ka quusan doonto galabta booska labaad | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Jeenyo iyo Dekedda oo midkood ay ka quusan doonto galabta booska labaad
Jeenyo iyo Dekedda oo midkood ay ka quusan doonto galabta booska labaad
Posted by: radio himilo May 6, 2016
Kulan cayaareed xiiso weyn xanbaarsan ayaa galabta bugcadda Banaadir Stadium ku dhexmari doona muruqyo weynta horyaalka Jeenyo iyo Dekedda.
Waa laba koox oo kamid ah kuwa ugu xoogan horyaalka, waxayna ku kala jiraan boosaska labaad iyo saddexaad, hayeeshee dagaalkooda u weyn ayaa ku saleysnaan doona iska soo dhexsaaridda kooxdii booska labaad ee kala horeynta loo caleemo saari lahaaa.
Cayaartooda ayaana galabta saacadda geeska Afrika marka ay tahay 03:30pm ka dhici doonta gegada Banaadir.
Kooxahan ayaa cayaaraya kulan cayaareedkoodii 17aad ee xilli cayaareedkan, waana kulankii 81aad oo horyaalka heerka koowaad xagaagan laga dheelo.
Dhibaatada ugu weyn ayaa ah in labadan kooxood ay dhibco wadaag yihiin, oo koox walba ay faraqa ku sidato 32 dhibcood, waxa u dhexeeyaase waa farqiga goolasha, kooxdii dhibcaha qaadataa ayayse neef ka fuqi doontaa oo saddex dhibcood hormari doonta.
Kooxdii soo baxdaa kulankan, waxay saddex dhibcood u jirsan doontaa hogaamiyaasha horyaalka Heegan oo iminka leh 38 dhibcood, haddiise ay barbaro galaan, waxay ka dhignaan doontaa in Heegan ay isla galabta u dabaal degi doonto hanashada horyaalka Soomaaliya.
Jeenyo ayaa indhaha ku heysa inay sameyso taariikhdii ay dhigtay lugtii hore ee Dekedda ay la cayaartay 15 Febraury ee sanadkan, markaas oo ay ku badisay 3-1.
Dekedda weligeed guul kama gaarin Jeenyo, wayna u oomantahay inay diiwaankaa sameyso.
Toddobo jeer oo labada kooxood ay kulmeen, afar goor waxaa guuleysatay Jeenyo halka saddexda kalena ay barbaro ku heshiiyeen.
Previous: Signjet oo guul ay ka gaartay Horseed uga soo baxday boosaska heerka hoose loogu laabto + Sawirro
Next: Dhageyso: Barnaamijka Madasha Haweenka